Umthandazo Saint Simon Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
La Umthandazo kaSanta SimonIngasetyenziswa ngexesha elihle lobomi bakho, le ngcwele izalisekisa zonke izicelo ezenziweyo kuye, nguye ophethe intsikelelo, ukhusela kwaye uphilise abo banesidingo. Ukuba ufuna ukufumana ulwazi oluthe kratya olunxulumene nesi sihloko, siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda inqaku esinalo.
1 Umthandazo uSimon Simon kunye nentsingiselo yawo
2 Itempile yokwenza iSan Simón Prayer
3 Umthandazo oyiNgcwele uSimon
3.1 Umthandazo oyiNgcwele uSimon wokwahlukana
Umthandazo uSimon Simon kunye nentsingiselo yawo
Le ngcwele iyaziwa kakhulu, ngakumbi kwiintolongo zaseGuatemala; Oku kungenxa yokuba kukholelwa ukuba yiyo enegalelo ekukhululeni amabanjwa; Ihlala ibizwa ngokuba ngcwele kaMayan otshaya notywala. Inani elimele oku kuthathelwa ingqalelo njengobuthixo kwabaninzi, liquka ukujonga indoda enxibe mpahla ezimnyama isuti, iqhina elinombala ofanayo kunye nomnqwazi omkhulu ohlala kuyo yonke imilinganiselo yentloko yakhe.
Inkangeleko ebonakalayo yale ngcwele ngokuqinisekileyo inokwenza ukuba uyithandabuze yonke imimangaliso ayenzayo. Nangona kunjalo, nangona ebengumntu onamadevu amdaka ngokungenalusini kunye nenkangeleko engaqhelekanga, ubonelele ngoncedo olukhulu kubantu abaludinga kakhulu.
Abalandeli baseSan Simón, ngokubanzi bazama ukunyuka zonke izinyuko ukuze ekugqibeleni bafike esibingelelweni, apho anikwa khona ukwamkelwa okumfaneleyo ngemimangaliso yakhe. Abanye bade bathandaze u Umthandazo kaSimon Simon ngeSpanish okanye ngolunye ulwimi, njengesiMaya; Le yinxalenye yomsitho oqhutywa njengesizathu sokumnika imbeko nentlonipho; Kwakhona, eli nani lihlanjwa ngotywala obuncinci, ubukhulu becala iramu kunye neecuba, azinakuphoswa njengenxalenye yomnikelo.
Ngokunxulumene nomzobo obekelwe ukuqala isithethe, kuhlala kubalulekile ukuba ubuso benceba buhlanganiswe ngeplastiki okanye ngento ethile ethintela umlilo. Kungenxa yokuba amakholwa amaninzi azama ukushiya imidiza evuthayo emlonyeni wengcwele. Khumbula ukuba, kuba kukho utywala kulo msitho, kukho umngcipheko omkhulu wengozi okanye isiganeko esingalindelekanga esenzekayo.
Itempile yokwenza iSan Simón Prayer
Ngokubanzi, kule ndawo kuhlala ii-shaman, indawo yokupaka ebekwe ngaphandle kwetempile, ixesha elininzi kulomlilo, nangona kunjalo, le yinxalenye yesiko elenziwa ngabalandeli bale ngcwele. Abo baphetheyo bagcina yonke into ngolungelelwano ngakumbi elo qela labantu elenza ubomi kule ndawo.
Nokuba, amaxesha amaninzi iqala njengendawo apho uninzi lwabemi abayindwendwelayo, bagqibela ngokutshaya kunye nokusela irum, njengomboniso wombulelo kwaye ngakumbi ukholo abanalo eSan Simón. Itempile imi kwidolophu eseGuatemala ebizwa ngokuba yiSan Andrés Itzapa, eyona ndlela ilula yokuyiqonda kukufumana iintaba zeli lizwe.
Iindwendwe ngokubanzi eziza kule tempile ngabantu bomthonyama, ngakumbi amaMeya. Oku ukuze uthathe inxaxheba kwiminyhadala eyahlukeneyo eyenzeka kule ndawo kwaye unike imbeko eSan Simón. Abanye banokumazi njengoMaximón, inyani yeli tyala kukuba ngexesha lezi zithethe abantu abaninzi basela utywala, ixesha elide, ngelixa bebasa icuba.
Abantu abeza kule tempile, banako ukuba ziimboni, baya kule ndawo benesinxibo esineempawu kunye nomfuziselo, benamakhanda. Ukubonisa iitalente abanazo kunye nokuqwalaselwa phambi kwawo onke amanye amakholwa.
Ngokunxulumene nomoya wale ndawo, ngenxa yokuba ngaphakathi kweminikelo umntu une-cigar, itempile ihlala inomsi omninzi; ngakumbi xa kuqala imibhiyozo okanye amasiko. Ukongeza koku, ezinye iziqhumiso, icuba okanye i-cypress branch ziyakhanywa.
Ngoku, xa sele sazi okuncinci malunga namasiko kunye nembonakalo yomzimba yale sato, kubaluleke kakhulu ukuqaqambisa amabinzana athile kwisivakalisi sakhe. Ngale ndlela, xa sifuna ukuyisebenzisa, asizukuphazamiseka okanye sixhalabe.
USimon Simon onamandla, njengomntu othobekileyo ndiza kumoya wakho andincede kuzo zonke iinkalo zobomi bemihla ngemihla, undikhathalele kwaye undikhokele kuso nasiphi na isoyikiso.
Ndiyathemba ngokupheleleyo ukukhanya kwakho okuvela kuThixo, ondinike ubomi, ukhuseleko, uxolo nothando.
Ezandleni zakho uSanto ndihambisa iingxaki okanye iimeko endijongana nazo, undinika ukhuseleko, ngamandla akho usombulula iingxaki zam.
Ekupheleni kwezi zivakalisi, siyaqaphela ukuba amandla amakhulu anikwe le ngcwele ayinyani. Lijongene nokukunika uxolo, inzolo kunye nokugcina ukhuselekile kuyo nayiphi na imeko onokuba semngciphekweni kuyo.
Ukongeza, kukho imithandazo eyahlukeneyo apho unokubulela okanye womeleze inkalo ethile yobomi bakho, ngomthandazo oya eSan Simón. Kukho nezinye izivakalisi ngenjongo yokwahlula abantu ababini; Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nesi sihloko, sikushiya apha ngezantsi:
Umthandazo oyiNgcwele uSimon wokwahlukana
Lo mthandazo ungasetyenziselwa ukwahlula loo mntu umthanda kakhulu, kwiqabane lakhe; okanye kwelinye ityala, ukuba wenza ukungathembeki. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ngalo mzuzu wokwenza lo mthandazo, kukubeka onke amandla akho kulomthandazo uwuphindayo; Ngale ndlela, bandise amathuba okuba isiphumo sikhawuleze kakhulu kunokuba ucinga.
Amanye amabinzana abaluleke kakhulu koku:
Ndifuna umntu endimthandayo ashiye iqabane lakhe kwaye ekugqibeleni, sikunye.
Ngaphandle kokufuna ububi nakubani na, kufuneka ubenze bahlukane kwaye sonwabe ngonaphakade.
Lo mthandazo ungasetyenziselwa kwimeko apho isiganeko senzekile nomhlobo okanye umntu omthandayo. Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyikhumbule kukuba, ukuba ngcwele, yonke into oyinikayo okanye oyicelayo kufuneka ibe nokholo kunye nokuthembela okukhulu.
Ukuba ulithandile eli nqaku, ungathandabuzi ukuqhubeka nokufunda ngakumbi malunga neli lizwe lihle lenkolo kwaye ufunde Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus wothando. Ukongeza, sikushiya ividiyo onokubonisana nayo naluphi na uhlobo lokuthandabuza onalo.